शेरबहादुरलाई नेतृत्वमा आउनबाट रोक्नेमा मेरो बढी ध्यान : कांग्रेस महामन्त्री कोइराला –
शेरबहादुरलाई नेतृत्वमा आउनबाट रोक्नेमा मेरो बढी ध्यान : कांग्रेस महामन्त्री कोइराला
शशांक कोइरालाले देउवा फेरि सभापति भए कांग्रेस धेरै कमजोर हुने दाबी गरेकाछन। ‘अब शेरबहादुरजीबाट पार्टी चल्दैन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘म सभापति हुनेरनहुने भन्दा पनि कसरी शेरबहादुरजीलाई नेतृत्वमा आउनबाट रोक्ने भन्नेमा बढी ध्यान मेरो छ ।’
संस्थापनइतर पक्षमा जति प्रतिस्पर्धी देखिए पनि अन्तिममा एक जना मात्रै उम्मदेवार हुने दाबी शशांकले गरेका छन् । ‘एक भएन भने त फेरि पनि शेरबहादुरजीले नेतृत्व हत्याउनुहुन्छ । त्यसैले हामीबीच सल्लाह हुँदै छ,’ उनले भने ।
‘कांग्रेस कोइरालाहरूको मात्रै बपौती हो र ? भारत किन जानुभएको थियो ?
सेमिनार थियो । त्यसैमा गएको हो । यूपीका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीजीसँग भेटवार्ता भयो ।
छुट्टै भेटवार्ता हो भयो । हामीले कुरा राख्यौं, दुई देशका विकासका बारेमा । अहिलेको सरकारप्रति उनीहरू पनि सन्तुष्ट भएको पाइएन ।
कांग्रेसकै विषयमा कस्तो चासो रहेछ ?
आगामी महाधिवेशनका विषयमा कुराकानी भए । पार्टी सभापति शेरबहादुरजीप्रति उनीहरूको धारणा सकारात्मक भएको पाइनँ ।
तपाईं र योगीबीचको धर्मको‘कनेक्सन’लाई लिएर टीकाटिप्पणी भइरहेको छ नि ?
धर्मबारे कुरा नै भएन ।
तपाईंको‘लाइन’ त हिन्दु राज्य स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हो नि, हैन ?
त्यहाँ त्यस्तो कुरा भएन तर म प्रस्ट छु, धर्म निरपेक्ष राख्न हुन्न । धर्म स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।
महाधिवेशनका लागि पार्टीभित्र तपाईंको तयारी कस्तो छ ?
अब १४ औं महाधिवेशनमा शेरबहादुरजीलाई नेतृत्वमा आउन नदिनका लागि म लागेको छु ।
तपाईंहरू संस्थापनइतर पक्ष नै विभाजित हुनुहुन्छ भने कसरी सम्भव हुन्छ ?
त्यसैका लागि मेरो ध्यान केन्द्रित छ । हामी एक भएनौं भने फेरि शेरबहादुरजीले नेतृत्व लिनुहुन्छ । त्यसैमा ध्यान दिनुपर्छ । एउटै उम्मेदवार हुने विषयमा छलफल भइरहेको छ । खालि को हुने भन्ने मात्र हो ।
तपाईं र शेखर कोइरालामध्ये एक होभन्छन् नि ?
रामचन्द्र दाइ पनि हुनुहुन्छ ।
कोइरालाले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने धारणा तपाईंहरूको हो ?
के कांग्रेस कोइरालाहरूको बपौती हो र रु त्यो त होइन नि । हामीबीच मिल्ने कुरा भइरहेको छ । समय छ ।
पार्टी सभापतिको चार वर्षको कार्यकाललाई कसरी लिनुहुन्छ ?
पार्टीलाई चारैतिर आक्रमण हुँदा समेत नेतृत्वले केही गर्न सकेन । कांग्रेसकै साथीहरू रिसाएका छन् । शेरबहादुरजीले पार्टी नै चलाउन सक्नुभएन, गति दिन सक्नुभएन । उहाँको केही भिजन नै रहनेछ ।
तपाईंहरूले सहयोग गर्दिनुभएन भन्ने छ नि ?
शेरबहादुरजीलाई मैले सधैं सहयोग गरेँ । कहिल्यै बाधक बनिनँ । चुनावमा पार्टी पराजित भयो । त्यतिबेला शेरबहादुरजीका टाउकामा मात्रै दोष हालेर हुँदैन भनेर मैले नै बचाएको हो । हामी पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा छौं भनेर बचाएको हो । त्यसपछि पनि गति लिन सक्नुभएन ।
पार्टी सभापतिसँग तपाईंको कुराकानीकत्तिको हुन्छ ?
बैठकमा मात्रै हुन्छ । पहिला जस्तो कुराकानी हुन्न ।
नेतृत्वले गल्ती गर्दा पनि तपाईं किन मौन बस्दै आउनुभएको ?
हो, विरोध गरिनँ । मैले नै विरोध गरेको भए बाहिर पार्टी सभापति कमजोर भएको सन्देश जान्थ्यो । अब त महाधिवेशन पनि आइसकेको छ । उहाँले केही पनि गर्न
सक्नुभएन । अब त बोल्नैपर्छ भनेर बोल्न थालेको हो ।
सभापतिले कांग्रेसलाई पुरानै अवस्थामा लैजान्छु भन्नुभएको छ नि ?
यो त सबैले भन्ने कुरा हो । फेरि शेरबहादुरजी नै सभापति बन्नुभयो भने पार्टी झनै खत्तम हुन्छ । भिजन नभएको नेताबाट पार्टी चल्दैन ।
तपाईंको भिजन के छ ?
पार्टी एक गराउने र सरकारमा लैजाने हैसियतमा पार्टीलाई पुर्याउने भिजन मसँग छ ।
महाधिवेशन तयारी अघि बढेको हो ?
केही बढेको छैन । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण भएको छैन । समायोजनको काम सकिएको छैन । तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका बढ्दै छ ।
किन तयारी अघि नबढेको ?
शेरबहादुरजीले चाँडै महाधिवेशन गराउन नै खोज्नुभएको छैन । कार्यकाल लम्ब्याइराख्ने र पार्टीलाई अप्ठ्यारामा पार्ने काम उहाँले गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । हामी छिटो गर्नुहोस्भन्दै दबाब दिँदै आएका छौं तर छिटो हुन सकेको छैन ।ईकान्तिपुर बाट सांभार
« आफू मर्न परे मर्न तयार तर भ्रष्टाचार हुन दिन्न : प्रधानमन्त्री ओली
भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकाहरुको किन बचाउ गर्दैछन प्रधानमन्त्री ? »